China Inesimba Uye Inokurumidza Roofing Inopisa Mhepo Welder LST-WP1 fekitori nevatengesi | Lesite
Simba uye nekukurumidza Roofing Inopisa Mhepo Welder LST-WP1
➢ Inesimba & Yekumhanyisa Welding Speed
Iyo ichangogadzirirwa padenga inopisa-mweya yekutengesa muchina WP1, iyo inotora yepamusoro-inopisa mweya mweya yekudziya tekinoroji, iri nyore kushanda, kugadzikana mukuita, yakakwira musimba, uye ine hwakawanda hwakawanda hweindasitiri kunyorera. Inogona kukurumidza kuona zvirimwa zvemaindasitiri, nzvimbo dzeveruzhinji, mapurojekiti epasi pevhu, madziva ekushambira, nezvimwewo Kuvaka uye kuwelda kwemhando yepamusoro ye thermoplastic yekudzivirira mvura senge PVC, TPO, EPDM, nezvimwe muminda yakawanda.
➢ Chekutanga sarudzo yeiyo huru-nzvimbo padenga remoto, kugadzikana mashandiro uye mashandisiro ekushandisa.
➢ WP1 BL yakasimbiswa vhezheni ine Brushless mota
➢ WP1 BL yakawedzeredzwa vhezheni inoipa iko kuita kwakanyanya uye kusimba, iine huwandu mashandiro akareba kupfuura aya ezvigadzirwa zvakafanana.
➢ Iyo mota-isina-brushless mota isina kutsiva kabhoni brashi, iine nguva yehupenyu inosvika kumaawa zviuru zvitanhatu.
➢ Yakavharwa-Loop Kudzora
Muchina uyu haugone chete kuratidza iwo wekutenderera tembiricha uye yekumhanyisa kumhanyisa, iyo system yekutonga inotora yakavharwa chiuno kudzora, zvisinei nevekunze magetsi shanduko, kana kumusoro kana pasi nzira yekutenderera pasi pemamiriro ekunze nharaunda shanduko, senge yakaipa mhinduro otomatiki gadziridza kumisikidza tembiricha uye nekumhanyisa, ita kuti iwo mafaera emoto ave akatsiga, awedzere kutenderera mhando.
➢ Zvidiki zvidiki zvakagamuchirwa
Kusangana zvidiki batch yakagadziriswa masevhisi
Are Spare zvikamu
Es Inosanganisira 1pc yakawedzera 230v / 4000w yekudziya element, 5 pcs fuses (yedunhu bhodhi), 1pc inopesana-inopisa pad, 1pc simbi brashi yekuchenesa yekumisikidza kamwene, 1pc simbi yekushandisa mubato, 1pc yekuwedzera counterweight, 1pc screwdrivers uye 4pcs zvipanera, 1 pc Chinyorwa cheChirungu.
➢ Kutakura kwemukati
➢ Muchina wakavharwa nezvikwiriso mukati mesimbi yekutakura.
➢ Shandisa epurasitiki bubble kurongedza zvikamu senge zvipenga zvikamu bhegi, mubato kune advoid makwikwi panguva yekufambisa
Nyore uye nzwisisa oparesheni.
Magetsi emagetsi 180-240V achiri kugona kushandiswa zvakajairika.
Yakavharwa-chiuno kudzora tembiricha uye nekumhanyisa neparamende yekumisikidza ndangariro uye yekukanganisa alarm basa
Anoshanda Welding kamwene
Anti-scald dziviriro dhizaini ine inowedzera kupisa vhoriyamu uye nemhepo vhoriyamu simbisa iyo yemhando yepamusoro uye nekuvandudza iko kugona kwekuvaka.
Yepamberi Bhandi Yakasanganiswa neDzvinyiriro Rollers System
Belt uye kumanikidza rollers ari nyore uye ari nyore kutsiva, iko kumanikidza kune mwero uye kufamba kwakagadzikana, uko kunogona kudzvinyirira iyo bulging phenomenon uye kuona yunifomu uye yakavimbika yekunamira musono
Yakarurama Positioning System
Kubudikidza nekumiswa kwegumbo rinotungamira rekumisa vhiri, rinovimbisa iyo welder inofamba yakatwasuka isina kutsauka.
Pashure: Banner Welder LST-UME
Zvadaro: Bhitumini Inopisa Mhepo Welder LST-WP2
Muenzaniso LST-WP1 LST-WP1
Simba 4200W 4200W
Kupisa 50 ~ 620 ℃ 50 ~ 620 ℃
Welding kumhanya 1-10m / min 1-10m / min
Welding musono 40mm 40mm
Zviyero (kureba × upamhi x kukwirira) 555x358x304mm 555x358x304mm
Net huremu 38kg 38kg
Vhoriyamu yemhepo Kwete kugadziriswa 70-100% Isingachinjiki
Chitupa CE CE
Garandi 1 gore 1 gore
Kukurumidza uye kunoshanda kwakanaka kwe TPO
Nematende Welder LST-MAT1
Usazviomesera Uye Multiple Application Roofing Weldi ...
Tafura Tarpaulin Hem Welder LST-PAU
Semi-auto Roofing Inopisa Mhepo Weldng Turu LST-TAC
Geo Hot Mhepo Welder LST700